မန္တလေး သို့ အပိုင်း (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » မန္တလေး သို့ အပိုင်း (၁)
မန္တလေး သို့ အပိုင်း (၁)
Posted by Mလုလင် on Feb 8, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 33 comments
ကြောချင်း ကပ် ၍ သော်လည်းကောင်း၊ နောက် မှလိုက်၍ သော်လည်းကောင်း မေးမြန်း၍ သော်လည်းကောင်း ရိုက်ဖြစ်ခဲ့သော ပုံလေးများဖြစ်ပါသည်။
အစစ အရာရာ စောင့်ရှောက်၊ ကျွေးမွေး၊ ကူညီ၊ သင်ပြ ပေးကြတဲ့ အတွက် လဲ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ရေပန်း အ၀ိုင်းပါ။ လေးဝိုင်းလုံး သွားခဲ့ပေမယ့် ကံဆိုးစွာ နဲ့ တစ်ပန်းပဲ ရေကောမီးကော လှနေလို့ တစ်ပုံ ပဲ တင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ကိုယ်ရောက်တဲ့အချိန်ရေမလွှတ်တော့တာနဲ့ မီးခဏ နားတာနဲ့ တစ်ဝိုင်းပဲ ရခဲ့တယ်ဗျာ။
ကြံခင်းဘက် တာဘောင် လို့ပြောတာပါပဲ။ ရွှံ့ ခူးနေကြတာလေ အုတ်ဖုတ် ဖို့အတွက်ပါ။ မနက်စောစော အေးကအေးနဲ့ ၀မ်းစာရေးပေမို့ ...
ပျော်နေကြတဲ့ ကိုရင်တွေ။ အဲ့ဒီ့ နေ့က ၀က်ပေါ်တယ် ဆိုပဲ။
ရွှေကျောင်းမှာ ရသလိုဖြစ်သလိုလေး ရိုက်ခဲ့သောပုံ
မန်းလေးကိုရောက်ရောက် ချင်းညမှာပဲ ရွှေမင်းသား ဦးပေါက် နဲ့ တူတူ ရွှေဘဲ ကိုရောက်ခဲ့ပြီး ပြောသမျှစကားကတော့ ဘယ်နေ့ ဘယ်မှာသွားရိုက်ဖြစ်မယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဦးစိန်သော့ နဲ့ တွေ့တဲ့ နေကတော့ ပိုမြိုင်ဆိုင် သွားတဲ့ နေ့ပေါ့။ မန်းလေး ခရီးစဉ် မှာတော့ အမှတ်တရ တွေအလွန်များပြားခဲ့တာမို့ စိတ်ထဲက မှာပဲသိမ်းထားလိုက်ပါတော့မယ်။
အမြဲ အမှတ်ရ နေမယ့် ခရီးတစ်ခုအတွက် အစ်ကိုတွေ ဦးလေး တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ …..
ပုံလေးတွေ က တကယ် အသက်ဝင်သကွဲ့။
ကိုရင်လေးတွေ ပုံမှာ ရှေ့ဆုံးက ကိုရင်ရဲ့ နားရွက် လေးတွေ က ကားနေတာဘဲ။
ဘုန်းကြီး ကန်တော့ တာ ဆင် ရိုက်ထားတာ မဟုတ်ရင်တော့ သာဓု တကယ်ခေါ်ပါရဲ့။
ပန်းသည်လေးက (ထင်တာဘဲ ပန်းကုံးတွေ ကိုင်ထားသလားလို့) သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ချစ်စရာလေး။ :-)
ဆင် ရင်းနဲ့ တကယ် ကန်တော့ လိုက်တာပါ အရီးရေ။ သူများပဲ လိုက်ရိုက်နေတာ ကိုယ့်ပုံ မပါသေးလို့ အမှတ်တရ သိမ်းထားဖို့ပါ။ ဦးပေါက် နဲ့ ကြောချင်းကပ် ရိုက်ခဲ့ကြတုန်းက လေ။
အယူအဆတွေကောင်းတယ်ဗျိုး အချိန်တော်တော်ပေးရမယ် ကိုရင်လေးတွေပုံအကြိုက်ဆုံးပဲ ဗျိုး
အိပ်(က)(စ)ပလိုရှာတွေ၊ အပါချာတွေ၊ဖယ်(လ)တာတွေ၊ဖိုးကပ်(စ)တွေ နားမလည်ပါဘူး။
စိတ်နှလုံးကိုလာထိရင် အဲဒီဓာတ်ပုံကောင်းတယ်လို့ လက်ခံတယ်။
ပန်းချီတချပ်ကို ကြည့်သလို တပုံချင်းကို အေးအေးဆေးဆေးကြည့် မိတယ်ဗျာ။
မြန်မာ့အလှ မြန်မာ့သဘာဝ လေးတွေကို ပီပီပြင်ပြင် ပုံဖော်ပေးထားတာပဲ။
ချစ်စရာကောင်းသော ပုံလေးများဖြစ်၍ နှစ်ခြိုက်သွားပါ၏။
ပုံလေးတွေ က အလန်းလေးတွေ ဘဲ
မောင်လုလင် နောက်တစ်ခေါက် လာရင် ထပ်ရိုက်ကြအုန်းမယ်လေ။
ရိုက်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။
Very nice shots, amazing.
I am waiting for other parts.
TT ygn ရေ… ပျောက်နေတယ် ဟ နော့
တကယ့်ဖရဲသီးကနုရင်တို့စား ရင့်ရင်အချိုတည်း စားပြီးရင်တောင်အစိကိုပျိုးပြန်ကျဲ တစ်ချို့ကိုကွာစေ့လုပ်
ဒီကအန်တီဖျဲကကော နုရင်တို့ ရင့်ရင်တည်း အစိကျဲ ကို ကွာစေ့လုပ်လို့ရသလို ပဲလား။……….
ကိုလုလင်ရယ် သူများကင်မလာကြီး ပျက်မှပဲ ငိုချင်စိတ်ပေါက်အောင်
ဒါ့ပုံတွေတင်တယ်နော်………….. ကျွော်ပြောတဲ့ ကျောင်းကအဲ့ဒီ့ကျောင်းဗျ လေးပေါက်ကိုရိုက်ဖို့ပြောတာ
ဒါ့ပုံတွေအားလုံးလှပါ၏ ။…….. ။ အားကျတုယူချင်စရာကောင်းပါ၏ (ကော်ပီကူးမယ်ပြောတာဟုတ်ဘူးနော်)
ဒီရက်ပိုင်းတော့ စာပဲလှိမ့်တင်ရတော့မယ် ဒါ့ပုံတွေထွက်ရိုက်ဖို့ကင်မလာလေးရပါတယ် ခုတော့အသစ်စက်စက်လေး သွားရှာပေါ့ကွယ်……….. အီးဟီး အဲဒါဟိုငနာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း
သူ့ ရေစိုခံကောင်းတယ်ပြောတဲ့အမှုကြောင့် ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်း မျောလိုက်စမ်း ။
အားတော့မငယ်ဘူး အိတ်ဆောင်ကင်မလာအညံ့စားနဲ့ရိုက်ပြီးတင်ပြမယ် စောင့်ကြည့်နေ………
အဲဗျ ။ အောက်ဆုံးမှာပို့စ်တင်တာဘယ့်နှယ်ထိပ်တက်သွားတာတုန်း ဒုက္ခေါ……..
ဘာပဲပြောပြော ရေထဲ နှစ် ရိုက်ရဲ တာကတော့ တကယ် သွေးကောင်းတာဗျို့  … ဒီပုံတွေ က တင်တာ ကြာပါပြီဗျ …. ဦးပေါက်တို့ ဦးစိန်သော့ တို့ ကိုရွှေမင်းသား တို့ နဲ့ မန်းလေး မှာ ရိုက်ထားကြတာ … ကိုရင် ပြောတာ ရွှေကျောင်းဗျ …
လုလင်ရေ မန်းလေးမှာ လပေါက်လာနေပြီးရိုက်နော်။
မင်းတို့ငါတို့ အားလုံးတောထဲမှာ ကင့်ထိုးပြိးသွားနေပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်
လုလင်ရေ နေခဲ့တဲ့သုံးလေးရက်က တကယ်ကို အမှတ်တရ နေ့စွဲတွေပါ။
မန္တလေး တစ်ခွင် ပြဲ ပြဲ စင် အောင် ရိုက်ပစ်လိုက်ကြရအောင်…
မြို့တော်ဝန် မောင်းထုတ် မှ ပြန်မယ်ဗျာ .. :-)
ကိုလု မန္တလေးရောက်တာတောင် ဖုန်းလေးဘာလေးမဆက်ဘူး ဒီက ဆက်မလားဆက်မလားနဲ. လိုက်ချင်လို.စောင့်နေတာ..
မန္တလေးသား လေးကို ထားပြီး သွားတာပေါ့…
သူဖြင့်အားတာလဲဟုတ်ဘဲနဲ့ ကို BEDC ကလဲကွယ်
အဲဒီလို ပုံလေးတွေ ရိုက်တတ်ချင်တာဗျ။
Mလုလင် ရေ။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေပြီပေါ့။
ဦး ဘလက်ချော ရေ .. ဦးစိန်သော့ကို သာ မေး ဗျ။ သင်လဲ သင်ပေးတယ် ထမင်းထဲ ကျွေးတယ် ဗျို့ ။
M – လုလင် ရိုက်ပြ၊
ပုံကောင်းတွေပါပဲ … ဘယ်နှစ်ခါကြည့်ကြည့် … ကြည့်ကောင်းတယ် …….. ။
ကိုM-lulin ရဲ့ ဓါတ်ပုံပညာကတော့ ဟိုက်ကလပ်တန်းဝင်ပါတယ် … ။ ( ပုတဲ့ လူကို ရှည်အောင် ရိုက်နိုင်ကတည်းက .. ဓါတ်ပုံဆြာကျော်မှန်း သိခဲ့တာပါ )
ပုံကောင်းများစွာ ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး …. နာမည်ကြီး ဒါ့ပုံဆြာဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
နံမည်ကြီး ဒါ့ပုံဆြာ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက မော်ဒယ် ကိုကိုမမ များကို ကော့ကော်ကံကား ရိုက်နိုင်မှဗျ။ ဒီနေ့က စပြီး တီတီ အိတုန် ဆုတောင်းသလိုဖြစ်အောင် ကြိုးစားတော့မယ်။ တီတီ အိတုန် ဆုတောင်းပြည့်အောင်နော်…… သားက အဲလိုရိုက်ချင်တာဟုတ်ဘူး..:-)
ကြာရင် ဓါတ်ပုံဆရာတွေအိမ်က မောင်းထုတ်ခံရမှာသေချာတယ်
စိတ်ကူးလေးတွေ ကောင်းတယ် ။ ရိုးရာမပျက် ကျန်နေသေးတဲ့ တို့ဓလေ့တွေ။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မကျွေးဖြစ်တဲ့စကား အကြွေး မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ကြုံကြိုက်ရင် ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်။
ကိုရင်ကို ကန်တော့နေတဲ့ပုံကို အနှစ်သက်ဆုံးပါ။ ပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ပြိုင်သင့်နေပါပြီ။
အကြွေးနော် တီတီ ပုရ် ..
နောက်လာရင် သူများကိုလဲ ခေါ်ပါရှင့်
ရွှေစာရံက ၀ယ်ထားတဲ့ ကင်မရာကြီးနဲ့ရိုက်ချင်ပါတယ်ရှင့်
ရွှေစာရံက က ကင်မလာနဲ့ရိုက်ရင်
ငါးဟင်း ချဉ်ချဉ်လေး ချက်ပြီး ငပိ ထောင်းနဲ့ စား .. ပြီးမှ ဖရဲသီးနဲ့ အချိုတည်း ..
ပြောရင်းတောင် လျှာရည် လည် လာပြီ။
ဒီမှာ အမကို အချိုတည်းမယ်ဒဲ့.. ပေါနေဒယ်..